Football Khabar » हाजार्ड घाइते भएको क्लबद्वारा पुष्टि : इएल क्लासिको खेल्ने सम्भावना कति ?
हाजार्ड घाइते भएको क्लबद्वारा पुष्टि : इएल क्लासिको खेल्ने सम्भावना कति ?
स्पेनिस रियल मड्रिडका स्टार खेलाडी इडेन हाजार्ड घाइते भएका छन् । आज क्लबले अफिसियल रूपमा जानकारी दिँदै बेल्जियन स्टारले चोट बोकेको पुष्टि गरेको छ ।
गत राति च्याम्पियन्स लिगमा फ्रेन्च क्लब पिएसजीविरुद्ध खेल्नेक्रममा हावार्ड घाइते भएका हुन् । खेलको ६९औं मिनेटमा हाजार्ड चोट बोकेर मैदान छाडेका थिए । उनको स्थानमा ग्यारेग बेल मैदान छिरेका थिए ।
आफ्नो घरमा पिएसजीसँग २–२ को बराबरीमा रोकिएको रियलका लागि गत राति हाजार्डले प्रभावशाली प्रदर्शन गरेका थिए । तर, हाजार्ड पिएसजी तथा राष्ट्रिय टिमका आफ्ना सहकर्मी थोमस मुनिएरको ट्याकलमा परेर चोट बोक्न बाध्य भए । हाजार्डको खुट्टामा चोट परेको छ । र, उनलाई ठीक हुन दुई सातासम्म लाग्नेछ ।
हाजार्डले रियलका बढीमा तीन खेल गुमाउने सम्भावना छ । जसमा ला लिगामा नोभेम्बर ३० मा अलाभेस, डिसेम्बर ७ मा इस्पान्योल र डिसेम्बर १६ मा हुने भ्यालेन्सियासँगको खेल गुमाउनेछन् । तर, डिसेम्बर १८ मा हुने सिजनको पहिलो इएल क्लासिको खेल्न उनी फिट हुनेछन् ।
प्रकाशित मिति ११ मंसिर २०७६, बुधबार १८:५४